NOVEMBER 2009 HOROSCOPE for SAGITTARIUS | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » NOVEMBER 2009 HOROSCOPE for SAGITTARIUS
Posted by mipukay on Nov 5, 2009 in Other - Non Channelized | 1 comment
နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက် မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက် အတွင်းမွေးဖွားသော SAGITTARIUS များအတွက်
နိူဝင်ဘာလ ၂၀၀၉ ဟောကိန်းများ
1.	နိုဝင်ဘာလတွင်အလုပ်ပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နေရမည်။ ၎င်းအတွက်ဖြစ်ပါ့မလားပြီးပါ့မလားဟု ရင်ခုန်မနေပါနှင့်အဆင်ပြေမည်။
2.	နိုဝင်ဘာ-၂ ရက်နေ့ဝန်းကျင်တွင်ကျန်းမာရေးအနည်းငယ်ချို ့တဲ့မည်။ ဂရုုစိုက်ရမည့်ကျန်းမာရေးကိစ္စများကို သတိထားမိမည်၊ ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။ သင်ယခုလုပ်ဆောင်သောကိစ္စများသည်သင့်ဘဝတွင်တစ်ဖြေးဖြေးတိုးတက်မှုကိုဖော်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်သင်ယခုလုပ်ဆောင်နေရသောလုပ်ငန်းဆောင်တာပြီးမြောက်ရန်အတွက်လမ်းသွားများမည်၊အကယ်၍ ၂ရက်မှရက်ဝန်းကျင်တွင်သင်မွေးဖွားပါကသင်အထက်ပါအကျိုးဆက်လုံးဝသက်ရောက်မည်။
3.	ယခုမှစ၍နောက် (၇) လတိုင်အောင် – ဇွန် ရ ရက်နေ ့အထိ သွားလာလှုပ်ရှားမှုဆက်တိုက်ရှိမည်။သင့်စပ်မှတော်သောဆွေမျိုုးမောင်နှမများ သင်နှင့်အတူမနေပါက သင့်ထံပြောင်းရွှေ ့နေထိုင်လိမ့်မည်။ ၎င်းနောက်မှတဖြည်းဖြည်းအရှိန်နှေးသွားပြီး ဒီဇင်ဘာ20 ရက်နေ့ရောက်မှဆုံးခန်းတိုင်မည်။
4.	မတ် ၁ဝ မှ ဂျွန်လ ရက်နေ ့အတွင်းတွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့် ပညာရေးအတွက်အကောင်းဆုံး အချိန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအချိန်အတွင်းထိရောက်စွာကြိုးစားပါက အတော်ဆုံးထဲတွင်စာရင်းဝင်လာမည်။
5.	နိုဝင်ဘာ ၄ရက်နှင့် ဒီဇင်ဘာ၁ ရက်နေ့တို့တွင် ဝမ်းကွဲမောင်နှမကိစ္စများ နှင့် အိမ်တွင်းရေးကိစ္စများကို ကြားသိရမည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုစတင်လုပ်ကိုင်သောအခြေအနေရှိသည်။
6.	သင့်တွင်ကောင်းကင်တမန်အလိုကျပေးအပ်ထားသော ရုပ်ရည်လက္ခဏာ ကိုနိုဝင်ဘာ 16 တွင်ရရှိပြီးနေ့ခင်းအိမ်မက်လမ်းလျှောက်ရသလို စွမ်းအင်မျိုးလက်ငင်းရမည်။ ၎င်းနေ့တွင် အနာဂတ်ကို မျှော်မှန်း၍ ရယူနိုင်ပါစေ သင့်လက်တစ်ကမ်းတွင်ရှိသည်။ လက်တွေ ့ကျကျပြောရမည်ဆိုလျှင် ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ရပ်သည် ဩချရလောက်အောင်ကြီးမားနေမည်။ အိမ်နီးနားချင်း မောင်နှမသားချင်းများ အံ့ဩ ရလောက်အောင် သင်ပြုမူရလိမ့်မည်။သင်သည် 16 ရက်ဝန်းကျင်+/-၅ရက်အတွင်း မွေးဖွားပါက အကျိုးသက်ရောက်မှုပိုဖြစ်မည်။
7.	နိုဝင်ဘာ 15 ရက်ဝန်းကျင်အတွင်းတွင် ရင့်ကျက်မှုနှင့်စည်းကမ်းလိုက်နာမှုအတွက် သင့်လူမှုရေးတွင် စိုးမိုးနေမည် ။ ၂၄ ရက်ဝန်းကျင်တွင်မွေးဖွားသူများအဖို ့ပို၍ သက်ရောက်မှုခံရမည်။ အထက်ပါကိစ္စသည် သင်၏အလုပ်ရှင်နှင့်လည်းသက်ဆိုင်နေသည် သူသည်သင့်ရုံးသို့ပြောင်းရွှေ့လာခြင်းသို့ အလုပ်ချိန်ပိုတိုးလုပ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁ဝ ခုနှစ်သို ့တိုင် သက်ရောက် ခြင်း ရှိမည်။ ဖြစ်လာသမျှကို စည်းကမ်းလိုက်နာခြင်းနှင့် ရင့်ကြတ်ခြင်းကိုအခြေခံပြီးလက်ခံလိုက်ပါ။ိ
အထက်ပါပောာချက်များသည်အောက်ပါ ဝဘ်ဆိုဒ်မှဟောကိန်းများအားဘာသာပြန်တင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အခြားသောရာသီဖွားများအတွက်လည်း၎င်းဆိုဒ်တွင် ပြည့်စုံစွာတွေ ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Banuelos	Salvador says: